Archive du 20181120
Rajoelina tia tena Mitady hanakorontana firenena indray
Nampitomboina ny isan’ny mpifidy dia zaraina ny vato ary mijanona eo amin’ny 40%, hoy i Andry Rajoelina, omaly. “Truqué” ny rindram-baiko na ny “logiciel”, ka izay zavatra ampidirina ao dia lainga no avoakany,
Lisi-pifidinana Hisokatra amin'ny 1 desambra saingy...
Hisokatra amin'ny voalohany ny volana desambra ho avy izao indray ny fanavaozana ny lisi-pifidianana ka tsy hifarana tanteraka raha tsy amin'ny 15 mey 2019.
Fifanolanana momba ny fifidianana Tototry ny fitakiana ny etsy Ambohidahy
Namoaka voka-pifidianana vonjimaika ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny sabotsy lasa teo ary miandry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy.
Arlette Ramaroson « Diso be io valim-pifidianana io. »
Nimenomenona mikasika ny valim-pifidianana avokoa ny rehetra, hoy ny kandida ho filoham-pirenena tamin’ny fihodinana voalohany, Arlette Ramaroson, raha naneho ny heviny mikasika ny vokatra vonjimaika farany navoakan’ny CENI ny sabotsy teo.
Vaomieran'ny Ranomasimbe Indianina Miantso fitoniana eo amin'ny rehetra
Nankasitraka ny fizotran'ny fifidianana tamin'ny 7 novambra lasa teo ny Vaomieran'ny Ranomasimbe Indianina (COI).
HCC Tokony haneho fomba fiasa mangarahara
Ny asan`ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia voafaritry ny lalàmpanorenana, voafaritry ny didy hitsivolana mifehy azy tamin`ny taona 2001 dia ny HCC, indrindra voakasika ny lalàm-pifidianana 2018 -008 sy 2018-009.
Victor Manantsoa HFI “”Ny fihaonambem-pirenena ihany no vahaolana”
Nivoaka tamin’ny fahanginana omaly Atoa Manantsoa Victor mpikambana eo anivon’ny hetsiky ny fanorenana ifotony na ny HFI.
Noho ny fanonganam-panjakana 2009 Very 10 taona i Madagasikara
Very 10 taona i Madagasikara raha tarafina amin’ny tantara sy ny zavatra niainan’ny firenena nanomboka ny faramparan’ny taona 2008 nikotrehana fanonganam-panjakana. Ny fihodinana faharoa amin’izao fifidianana filoha ankehitriny izao dia tandindon’ny « ni…ni… » tamin’ny taona 2013 miampy ny fanjakana Rajaonarimampianina, saingy miverina amin’ny tany aloha isika ankehitriny.
Dia gaga anao aho ry Malagasy namana Tsy ekenao ny valim-pifidianana Lazainao feno hosoka ireo taratasy Tena miaiky anao aho raMalagasy.
KMF-CNOE Tsy ampy ny fanabeazana tamin'ny fifidianana
Anisan'ny voasokajy ho ambany ny taham-pahavitrihana tamin'ity fifidianana ity, ka ahiana tsy ho marin-toerana izay ho filoham-pirenena vaovao eo, raha ny salanisan'ireo olom-pirenena nandrotsa-bato no jerena, hoy ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena manabe ny fifidianana (KMF-CNOE), satria hisy fiantraikany amin'ny maha ara-dalàna azy.
Lalao Ravalomanana Miantso ny SAMVA mba handray ny andraikiny
Diso mivangongo loatra ny fako eto an-drenivohitra ankehitriny. Ankoatra ireo toerana ahitana dabam-pako izay feno maloto dia toerana maro tsy hampoizina toy ny eny Ampefiloha ambadiky ny tambohon’ny sekoly ambony ENS ihany koa no efa ahitana izany, mibahana eo amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra.
Trano fivoahana 7,8 tapitrisa ireo olona tsy manana izany eto Madagasikara
7,8 tapitrisa ireo olona tsy manana trano fivoahana eto Madagasikara. Lohalaharana amin’izany ireo monina eny amin’ny faritra iva eto an-drenivohitra.
ZAVA-PISOTRO MANITRA VOANKAZO Manomboka mahazo vahana eto amintsika
Manomboka mahazo vahana eto amintsika ny zava-pisotro manitra voankazo.
Rajoelina sy Ravatomanga Hampanantsoin’ny fitsarana Frantsay ?
Tsy marina ny filazana fa nitsoaka sy tsy niseho teny amin’ny Bianco i Mbola Rajaonah, hoy ny mpisolovava azy Eric Rafidison, omaly. Tonga namaly ny antson’ny BIANCO ny Filoha tale jeneralin’ny vondron-tserasera RLM Communication i Mbola Rajaonah ary niatrika ny fanadihadiana natao azy omaly maraina.
Vazo fanevan’ny CFM Mitory tanteraka ny fihavanana
Zava-dehibe ny hira ho an’ny olona manao kanto sy mamorona azy ary ahafahana mampita hafatra haingana be.
Rugby Tournoi Firaisankina Afa bela ny Cheminots Besetroka
Afa-bela tamin’ny Matadorea Anosipatrana ny Cheminots Besetroka, tamin’ny alahady 18 novambra 2018 tamin’ny lalao famaranana rugby “Tournoi
Klioban’ny Elgeco Plus Nanolotra fitaovana ho an’ny CUA
Manome sehatra ny tontolon’ny fanatanjahantena ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Nitohy hatrany fiaraha-miasa amin’ ny Klioba Elgeco Plus, izay tompon’ny amboaran’i Madagasikara na “Coupe de Madagasikara” sy ny CUA.
Fikambanana Za’Gasy Natomboka ny hetsika Sabotsy Fifanampiana
Nosokafana ofisialy tamin’ny sabotsy 17 novambra teo teny amin’ny sekoly Md Etienne Ambanidia ny hetsika Sabotsy Fifanampiana. Hetsika nataon’ny fikambanana Za’Gasy tarihan’i Jean Navandahy Ratiharison hanampiana ara-tsosialy an’ireo mpikambana ao aminy eny amin’ny boriborintany faha-2 isaky ny sabotsy mazava loatra.
Ela no naniriana ity firenena malalantsika ity hiadana sy ho finaritra. Heverina fa tsy misy manda ny hahatanteraka izany. Raha hanontaniana ireo mpisehatra politika rehetra ny fanirian’izy ireo dia azo antoka avy hatrany fa eny no valiny.
Foibem-paritry ny fahasalamana any Sofia Mitaky ny hanalana ny talem-paritry ny fahasalamana ny mpiasa
Mandrahona hanao hetsika fanairana ho fitakiana ny fanalana ny talem-paritry ny fahasalamana amin’ny toerany ny mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny foibem-paritr’i Sofia.
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TENY AMPANDRANA
Manoloana ilay lozam-pifamoivoizana niseho teny Bel’Air Ampandrana ny alahady tolakandro lasa teo naharatrana olona roa nitondra moto nanao taingin-droa,
Hafahafa tamin’ny maro ihany ny nandray ny fanambaran’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, omaly.
Talen’ny SAMVA « Aoka tsy ho fako politika no hariantsika ! »
Minitra vitsy taorian’ny fanambarana nataon’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, dia nitondra fanazavana avy hatrany mikasika ny antony tsy nahatontosan’izy ireo ny asany ny avy eo anivon’ny SAMVA na ny sampandraharaha nampisahanin’ny minisiteran’ny rano ny fanangonana ny fako eto Antananarivo.
Firaisamonim-pirenena Mbola mila ezaka be
Manana anjara toerana lehibe amina firenena iray ny firaisamonim-pirenena sivily,
Tetibolam-panjakana 2019 Hodinihina anio sy rahampitso
Araka ny voalaza ao anatin'ny lalàmpanorenana dia mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ireo parlemantera ary io ilay atao hoe : "cession budgétaire" na fivoriana handinihana ny tetibolam-panjakana amin'ny taona ho avy.
Indostria eto Madagasikara Marefo ny mpanambola mandraharaha
Mbola miandry ny fifidianana ho tanteraka soamantsara angamba ny mpanodim-bola sy ny mpandraharaha fa tena maivana ny fampiasam-bola amin’izao fotoana, araka ny tatitry ny filohan’ny Sendikan’ny Indostria eto Madagasikara, Fredy Rajaonera.